အဆုတ္ကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည့္ ရဲယိုရြက္...! - Thadin
HomeHEALTHYအဆုတ္ကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည့္ ရဲယိုရြက္…!
March 15, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on အဆုတ္ကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည့္ ရဲယိုရြက္…!
Source: Medicine Woman Asia
ရဲယိုရွက်က ဆေးဘက်ဝင် အသီးအဖြစ် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေ လက်ခံစားသုံးလာကြတဲ့ အသီးပါဘဲ။ မကြာသေးခင်ကမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ စမ်းသပ်ချက်အရ ရဲယိုသီးမှာလည်း ကင်ဆာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး အဆုတ်ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေကို သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိတယ်လို့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
This Year : 232318
Total Users : 591342
Total views : 2712561